Umatshini wokwenza ityathanga abavelisi kunye nababoneleli - China Umatshini wethambo yesosi
Umatshini wePasta kunye nezixhobo zeSpaghetti
Izixhobo fries French
Umatshini weelekese othambileyo
Izixhobo zentlanzi ezinziweyo
Isixhobo esenziwe ngokutsha esenziwe ngokutsha seebhiya
Iziqhamo kunye nemifuno yokomisa kunye nokupakisha umgca wonke
Umatshini wokutya onkonkxiweyo kunye nezixhobo zokuvelisa iJam
Umatshini ococekileyo wokuhambisa amanzi
Isiselo seCarbonated kunye nesoda yomatshini wokusela
Izixhobo zotywala kunye nomgca wemveliso
Iapile, ipere, umdiliya, umrharnate womatshini wokulungisa ...
Umnquma, iplamu, ibayberry, ipesika, ibhilikosi, iplum processi ...
I-Blueberry, i-blackberry, i-mulberry, i-strawberry, i-raspber ...
Imango, ipayina, ipapaya, umatshini wokuqhubekeka wegwava a ...
Inkaba ye-orenji, i-citrus, i-grapefruit, i-lemon processing m ...
Utamatisi unamathela, umatshini wokuhambisa isosi kunye nepro ...
Unamathisele i-Tomato, umatshini wokuhambisa isosi kunye nomgca wemveliso
NGOKUTSHINTSHA OOMATSHINI (SHANGHAI) LIMITED ngumthengisi wokuqala waseTshayina ojikeleze umgca wokuvelisa iitumato. Ngentsebenziswano nonxibelelwano ne-Itali neJamani i-FBR / Rossi / FMC kunye neenkampani ezininzi, ukudibanisa iimpawu zobugcisa zabalingani bamanye amazwe.
Inkaba ye-orenji, i-citrus, iidiliya, umatshini wokulungisa ilamula kunye nomgca wemveliso
Inkaba ye-orenji, i-citrus, iidiliya, ilayini zemveliso yeelamuni ikakhulu zibandakanya izixhobo zangaphambi konyango, ezona zixhobo ziphambili zejusi e-China, izixhobo zoxinaniso lwejusi yeorenji, i-asteurization kunye nokuzaliswa kwetyhubhu ye-UHT kunye nezixhobo zokukhupha ioyile njl.
I-Blueberry, i-blackberry, i-mulberry, i-strawberry, i-raspberry, i-bayberry ebomvu, umatshini wokulungisa i-cranberry kunye nomgca wemveliso
I-Blueberry, i-blackberry, i-mulberry, i-strawberry, i-raspberry, i-bayberry ebomvu, umatshini wokulungisa i-cranberry kunye nomgca wokuvelisa unokuvelisa ijusi ecacileyo, ijusi ene-turbid, ijusi yomxube, iziqhamo umgubo, iziqhamo jam kunye nezinye iimveliso.
Iapile, ipere, umdiliya, umrharnate wokulungisa umatshini kunye nomgca wemveliso
Iapile, ipere, umdiliya, umrharnate womatshini wokulungisa kunye nomgaqo wokuvelisa: ibhotile yeglasi, ibhotile yeplastiki ye-PET, i-zip-top can, iphakheji ethambileyo ye-aseptic, ibhokisi yezitena, ibhokisi ephezulu ye-gable, 2L-220L ingxowa ye-aseptic kwidrum, iphakheji yebhokisi , 70-4500g tin unako.
I-Olive, iplamu, i-bayberry, ipesika, iapilkosi, umatshini wokulungisa iplamu kunye nomgca wemveliso
Olive, iplamu, i-bayberry, ipesika, iapilkosi, umatshini wokulungisa iplum kunye neepakethe zemigca yokuvelisa: ibhotile yeglasi, ibhotile yeplastiki ye-PET, i-zip-top can, iphakheji ye-aseptic ethambileyo, ibhokisi yezitena, ibhokisi ephezulu ye-gable, 2L-220L ingxowa ye-aseptic kwidrum, ibhokisi package, ibhegi yeplastiki, 70-4500g itoti tin.
Imango, ipayina, ipapaya, umatshini wokulungisa iiguava kunye nomgca wemveliso
Imango, ipayina, ipapaya, umatshini wokulungisa i-guava kunye nomgca wemveliso kufanelekile ukulungiselela iziqhamo ezikweleenjiko ezifana nemango, ipayina, ipapaya, iguava njalo njalo.